မလှတဲ့အိမ်ထောင်ရှင်မ မရှိဘူး…အသုံးမကျတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးပဲ ရှိတယ်။ – King Media
ဘဝဆိုတာ ဖြတ်သန်းရခြင်း တစ်ခုမျှသာပဲ . . .။ အချိူ့က ဘဝလက်တွဲဖော် ရတတ်ပေမယ့် အချို့ကတော့ ကံဆိုးစွာ ဘဝခြေထိုးဖော်သာ ရတတ်ပါတယ် . . .။ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ အိတ်ပိတ်ကံစမ်းရသလိုပါပဲ။ အပြင်ပန်းကတော့ ရွေးတာပဲ။ အထဲမှာ ပါချင်ရာပါတတ်တာ။ အခန့်မသင့်ရင် ဘယ်တော့မှ မပေါက်မယ့် ထီလက်မှတ်ဟောင်းကြီးနဲ့
က်ထပ်ရသလို ဖြစ်နိုင်သေးတယ် . . .။ အိမ်ထောင်ရေး သာယာနေရင်တော့ အိမ်ထောင်ကျရတာ သိပ်တော့ မဆိုးရှာပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရေးမသာယာရင်တော့ စိတ်ဆင်းရဲရတာနဲ့ သက်တမ်းတိုမယ်။ ရုပ်အိုမယ်။ ငွေကြေး အဆင်ပြေနေရင် ခံသာသေး။ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေရတဲ့ကြား ငွေကြေးပါ အဆင်မပြေ၊ ဒီကြားထဲ အိမ်ထောင်ရေးပါဖောက်ပြန်လာရင်တော့ ဒုက္ခနဲ့လှလှကြီးတွေ့ တော့တာပါပဲ . . .။ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝက မလွယ်ပါဘူး . . .။ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်လာလို့ ကလေးမယူသေးရင် ကလေးမရအောင် ဆေးထိုးဆေးစား လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဆေးနဲ့မတည့်သူဆို အသားတွေ မွဲလာမယ်။ အသားတွေ ပွလာမယ်။ အဆီတွေ တက်လာမယ်။ ဒါမှမဟုတ် မတရား ပိန်လာမယ်။
ဗိုက်ခေါက်တွေ ထွက်လာပါမယ် . . .။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး ကလေးမွေးပြီးပြန်တော့လည်း ဗိုက်က ချက်ချင်းပိန်မသွားပါဘူး။ ပူစီပေါင်း လေလျှော့လိုက်သလို အသားတွေ တွဲလာမယ်။ အကြောပြတ်ရာတွေနဲ့ လှချင်တိုင်း လှလာနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး . . .။ ကလေးများ ရလာတော့ ပိုခြေချုပ်မိပါပြီ။ ညည ကလေးကငို၊ သေးကစို အိပ်ရေးကပျက် ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိတဲ့ ယောက်ျားဆို တော်ပါသေး။ မဟုတ်ရင်တော့ လူရုပ်တောင် ပေါ်မှာ မဟုတ်ဘူး . . .။ မိန်းမဖြစ်ရဘဝမလွယ်ပါဘူး။ လူမဆန်ကိုယ်ချင်းစာတရား အသိတရားမရှိတဲ့ တစ်ချို့ယောက်ျားတွေယူခါစတုန်းကလို မလှမပဖြစ်နေတဲ့ မိန်းမတွေကို စိတ်ကုန်တယ်လေနဲ့ ဖြစ်ရပြန်တယ် . . .။
ရှာတဲ့ပိုက်ဆံက နှစ်ပဲခြောက်ပြားနဲ့ အိမ်ကမိန်းမကို စိတ်ကုန်ရတယ် ပြောထွက်ရဲသေး . . .၊ ပေးလိုက်လေ ပိုက်ဆံများများ၊ တစ်ကိုယ်လုံး ပေါင်းအထပ်ထပ် တင်ခိုင်းလိုက် ဆံပင်ကစလို့ ခြေမခြေသည်းခွံထိ ပိုက်ဆံပေးရင် လှအောင်ပြင်လို့ရတယ် . . .။ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)ကနေ ကွင်းသုသုလို ကြွကြွရွရွ ဖြစ်နိုင်တဲ့ခေတ်မှာ ကိုယ့်မိန်းမကိုယ် ငွေပုံပေးပြီး အလှပြင်ခိုင်းလိုက်လေ . . .။ တစ်ချို့ယောက်ျားတွေ ကိုယ်တိုင်က အသုံးမကျဘဲ ကိုယ့်မိန်းမ မလှနိုင်တာကို အပြစ်တင်နေတတ်ကြတယ် . . .။ မလှတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မ မရှိဘူး။ အသုံးမကျတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးပဲ ရှိပါတယ် . . .။ မိန်းမတွေများစုက အိမ်ထောင်ကျ ကလေးတွေရလာပြီဆိုရင် သူတို့စိတ်နဲ့ခန္ဓာက လင်ယောက်ျားနဲ့ သားသမီးအတွက်ပဲ အစစရာရာ ဦးစားပေးစဉ်းစားတတ်ကြတယ်။ သူ့တို့အတွက်ကို သူတို့အချိန်ပေးဖို့ မေ့သွားတတ်ကြပါတယ် . . .။
သူတို့ကိုယ်သူတို့ အရင်ကလိုလှလှပပ မနေတော့ပဲ ဖိုတီဖတ်သပ်ဖြစ်နေရခြင်းက သူတို့ရဲ့ရင်သွေးလေတွေအတွက် ပိုက်ဆံတွေစုပြီး ကောင်းကောင်း ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ဖို့ အတွက်ပါ . . .။ ကိုယ့်အတွက် ဘဝတစ်ခုလုံးပုံအပ်ထားတဲ့ မိန်းမကို အလှတစ်ခုထဲကို ကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်စရာလို့မြင်ရင်…. .အချိန်ကိုကြည့်…..အရွယ်ကိုကြည့်……တွေးရပြောရထိန်းချုပ်ရတဲ့ အရာတွေကိုကြည့်လေ …။ ၁၈နှစ်နဲ့၃၈နှစ်မတူနိုင်သလို ၁၈နှစ်အတွေးနဲ့၃၈နှစ်အတွေး ကွာဟမယ်လေ။ အိမ်ထောင်ရှင်ဇနီးတာဝန်ဝတ္တရားတွေကြီးလာလေ ။
သူတို့ရဲ့ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ ပျက်စီးယိုယွင်းလာလေပါပဲ။ လူပဲဘာသားနဲ့ ထုထားတာမို့လဲ အသွေးသားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာလေနော် …။ ယူထားတုန်းကတော့ ဆယ်ကျော်သက်/နှစ်ဆယ်ကျော်လေး ငယ်ရှိန်နဲ့လှပနုပျိုချိန် ၊ အဲဒီလိုနုပျိူမြစ်ခြင်းတွေ စားသုံးပြီး အရွယ်တွေကျလာ သားသမီးတွေမွေးပေး၊ ကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာမှ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အရင်ကလ မလှမပဖြစ်လာတာ ကိုယ့်ပရောဂကြောင့်လား ဆိုတာလည်း ထည့်စဉ်းစားတတ်ရပါမယ် . . .။
ကိုယ်ယူထားတဲ့ဇနီးမယားအပေါ် ဘယ်လောက်တာဝန်ကျေခဲ့လဲ၊ အပျိုဘဝမှာ နေချင်သလိုနေ စားချင်သလိုစား လှလှပပဖြစ်နေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက် အခုသူမ ဘာကြောင့်မလှမပဖြစ်နေရလဲ၊ သူမလှပအောင် သင်ဘယ်လောက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့လဲ၊ သူမအရင်ကလိုမလှပနိုင်တော့တာ ဘာကြောင့်လဲ . . .၊ အရင်က အရမ်းစိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်က အခုမှစိတ်မကြည်မရွှင် စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်နေရတာ သင်ကိုယ်တိုင် မိသားစုအပေါ် တာဝန်ကျေခဲ့ရဲ့လား၊ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသားများ တရားမျှတစွာ တွေးတတ်ကြပါစေ . . .။ သင်ယူထားတဲ့မိန်းမ သင့်အတွက်အချိန်မပေးတော့ပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အချိန်ပြန်ပေးတဲ့အချိန်ကြရင် အရင်ကထက် အဆတစ်ရာ ပြန် လှလာနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်မမေ့ပါနဲ့နော် . . .။
ဘဝဆိုတာ ဖွတျသနျးရခွငျး တဈခုမြှသာပဲ . . .။ အခြိူ့က ဘဝလကျတှဲဖျော ရတတျပမေယျ့ အခြို့ကတော့ ကံဆိုးစှာ ဘဝခွထေိုးဖျောသာ ရတတျပါတယျ . . .။ အိမျထောငျပွုတယျဆိုတာ အိတျပိတျကံစမျးရသလိုပါပဲ။ အပွငျပနျးကတော့ ရှေးတာပဲ။ အထဲမှာ ပါခငျြရာပါတတျတာ။ အခနျ့မသငျ့ရငျ ဘယျတော့မှ မပေါကျမယျ့ ထီလကျမှတျဟောငျးကွီးနဲ့
ကျထပျရသလို ဖွဈနိုငျသေးတယျ . . .။ အိမျထောငျရေး သာယာနရေငျတော့ အိမျထောငျကရြတာ သိပျတော့ မဆိုးရှာပါဘူး။ အိမျထောငျရေးမသာယာရငျတော့ စိတျဆငျးရဲရတာနဲ့ သကျတမျးတိုမယျ။ ရုပျအိုမယျ။ ငှကွေေး အဆငျပွနေရေငျ ခံသာသေး။ အိမျထောငျရေး အဆငျမပွရေတဲ့ကွား ငှကွေေးပါ အဆငျမပွေ၊ ဒီကွားထဲ အိမျထောငျရေးပါဖောကျပွနျလာရငျတော့ ဒုက်ခနဲ့လှလှကွီးတှေ့ တော့တာပါပဲ . . .။ အိမျထောငျရှငျ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဘဝက မလှယျပါဘူး . . .။ အိမျထောငျသညျဖွဈလာလို့ ကလေးမယူသေးရငျ ကလေးမရအောငျ ဆေးထိုးဆေးစား လုပျရပါလိမျ့မယျ။ ဆေးနဲ့မတညျ့သူဆို အသားတှေ မှဲလာမယျ။ အသားတှေ ပှလာမယျ။ အဆီတှေ တကျလာမယျ။ ဒါမှမဟုတျ မတရား ပိနျလာမယျ။
ဗိုကျခေါကျတှေ ထှကျလာပါမယျ . . .။ ကိုယျဝနျဆောငျပွီး ကလေးမှေးပွီးပွနျတော့လညျး ဗိုကျက ခကျြခငျြးပိနျမသှားပါဘူး။ ပူစီပေါငျး လလြှေော့လိုကျသလို အသားတှေ တှဲလာမယျ။ အကွောပွတျရာတှနေဲ့ လှခငျြတိုငျး လှလာနိုငျတော့မှာ မဟုတျပါဘူး . . .။ ကလေးမြား ရလာတော့ ပိုခွခြေုပျမိပါပွီ။ ညည ကလေးကငို၊ သေးကစို အိပျရေးကပကျြ ကိုယျခငျြးစာတရားရှိတဲ့ ယောကျြားဆို တျောပါသေး။ မဟုတျရငျတော့ လူရုပျတောငျ ပျေါမှာ မဟုတျဘူး . . .။ မိနျးမဖွဈရဘဝမလှယျပါဘူး။ လူမဆနျကိုယျခငျြးစာတရား အသိတရားမရှိတဲ့ တဈခြို့ယောကျြားတှေယူခါစတုနျးကလို မလှမပဖွဈနတေဲ့ မိနျးမတှကေို စိတျကုနျတယျလနေဲ့ ဖွဈရပွနျတယျ . . .။
ရှာတဲ့ပိုကျဆံက နှဈပဲခွောကျပွားနဲ့ အိမျကမိနျးမကို စိတျကုနျရတယျ ပွောထှကျရဲသေး . . .၊ ပေးလိုကျလေ ပိုကျဆံမြားမြား၊ တဈကိုယျလုံး ပေါငျးအထပျထပျ တငျခိုငျးလိုကျ ဆံပငျကစလို့ ခွမေခွသေညျးခှံထိ ပိုကျဆံပေးရငျ လှအောငျပွငျလို့ရတယျ . . .။ ညီညီမောငျ(စမျးခြောငျး)ကနေ ကှငျးသုသုလို ကွှကွှရှရှ ဖွဈနိုငျတဲ့ခတျေမှာ ကိုယျ့မိနျးမကိုယျ ငှပေုံပေးပွီး အလှပွငျခိုငျးလိုကျလေ . . .။ တဈခြို့ယောကျြားတှေ ကိုယျတိုငျက အသုံးမကဘြဲ ကိုယျ့မိနျးမ မလှနိုငျတာကို အပွဈတငျနတေတျကွတယျ . . .။ မလှတဲ့ အိမျထောငျရှငျမ မရှိဘူး။ အသုံးမကတြဲ့ အိမျထောငျဦးစီးပဲ ရှိပါတယျ . . .။ မိနျးမတှမြေားစုက အိမျထောငျကြ ကလေးတှရေလာပွီဆိုရငျ သူတို့စိတျနဲ့ခန်ဓာက လငျယောကျြားနဲ့ သားသမီးအတှကျပဲ အစစရာရာ ဦးစားပေးစဉျးစားတတျကွတယျ။ သူ့တို့အတှကျကို သူတို့အခြိနျပေးဖို့ မသှေ့ားတတျကွပါတယျ . . .။
သူတို့ကိုယျသူတို့ အရငျကလိုလှလှပပ မနတေော့ပဲ ဖိုတီဖတျသပျဖွဈနရေခွငျးက သူတို့ရဲ့ရငျသှေးလတှေအေတှကျ ပိုကျဆံတှစေုပွီး ကောငျးကောငျး ပွုစုပြိုးထောငျနိုငျဖို့ အတှကျပါ . . .။ ကိုယျ့အတှကျ ဘဝတဈခုလုံးပုံအပျထားတဲ့ မိနျးမကို အလှတဈခုထဲကို ကွညျ့ပွီး စိတျပကျြစရာလို့မွငျရငျ…. .အခြိနျကိုကွညျ့…..အရှယျကိုကွညျ့……တှေးရပွောရထိနျးခြုပျရတဲ့ အရာတှကေိုကွညျ့လေ …။ ၁၈နှဈနဲ့၃၈နှဈမတူနိုငျသလို ၁၈နှဈအတှေးနဲ့၃၈နှဈအတှေး ကှာဟမယျလေ။ အိမျထောငျရှငျဇနီးတာဝနျဝတ်တရားတှကွေီးလာလေ ။
သူတို့ရဲ့ ရုပျခန်ဓာကိုယျတှေ ပကျြစီးယိုယှငျးလာလပေါပဲ။ လူပဲဘာသားနဲ့ ထုထားတာမို့လဲ အသှေးသားနဲ့ တညျဆောကျထားတာလနေျော …။ ယူထားတုနျးကတော့ ဆယျကြျောသကျ/နှဈဆယျကြျောလေး ငယျရှိနျနဲ့လှပနုပြိုခြိနျ ၊ အဲဒီလိုနုပြိူမွဈခွငျးတှေ စားသုံးပွီး အရှယျတှကေလြာ သားသမီးတှမှေေးပေး၊ ကိုယျ့လကျထဲရောကျလာမှ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ အရငျကလ မလှမပဖွဈလာတာ ကိုယျ့ပရောဂကွောငျ့လား ဆိုတာလညျး ထညျ့စဉျးစားတတျရပါမယျ . . .။
ကိုယျယူထားတဲ့ဇနီးမယားအပျေါ ဘယျလောကျတာဝနျကခြေဲ့လဲ၊ အပြိုဘဝမှာ နခေငျြသလိုနေ စားခငျြသလိုစား လှလှပပဖွဈနတေဲ့မိနျးမတဈယောကျ အခုသူမ ဘာကွောငျ့မလှမပဖွဈနရေလဲ၊ သူမလှပအောငျ သငျဘယျလောကျပံ့ပိုးပေးနိုငျခဲ့လဲ၊ သူမအရငျကလိုမလှပနိုငျတော့တာ ဘာကွောငျ့လဲ . . .၊ အရငျက အရမျးစိတျသဘောထားကောငျးတဲ့ မိနျးမတဈယောကျက အခုမှစိတျမကွညျမရှငျ စိတျဆိုးစိတျကောကျဖွဈနရေတာ သငျကိုယျတိုငျ မိသားစုအပျေါ တာဝနျကခြေဲ့ရဲ့လား၊ အိမျထောငျရှငျ အမြိုးသားမြား တရားမြှတစှာ တှေးတတျကွပါစေ . . .။ သငျယူထားတဲ့မိနျးမ သငျ့အတှကျအခြိနျမပေးတော့ပဲ ကိုယျ့ဟာကိုယျ အခြိနျပွနျပေးတဲ့အခြိနျကွရငျ အရငျကထကျ အဆတဈရာ ပွနျ လှလာနိုငျတယျဆိုတာ သငျမမပေ့ါနဲ့နျော . . .။